» “आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओली” “आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओली” – हाम्रो खबर
“आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओली”
हाम्रो खबर संबाद दाता 124 Views
“काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज मोरङ जानुहुने भएको छ ।”
“एमाले जिल्ला कमिटी मोरङले विराटनगरमा आयोजना गर्न लागेको शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओली त्यसपतर्फ जानुहुने भएको हो ।सम्बोधनपछि ओली आजै काठमाडौं फर्किने तालिका रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।”
“यो पनि:- “बाबुराम,लाई ओलीको प्रश्न : कहाँको आम्दानीले, छोरीलाई बेलायतमा, पढाउनुभयो ?
“काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आम्दानीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।”
“आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुरामकी छोरी बेलायतमा पढेकोमा प्रश्न उठाएका हुन् ।”
“हामी बेलायत जाने भिसा पाउँदैनथ्यौं । बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे । कसरी होला ? के जादु होला त्यसमा भन्नुस् त ?’ उनले भने, ‘एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, नागरिकता चाहिन्छ पासपोर्ट पाउन । कुन पासपोर्टबाट जानुभएको थियो ? कहाँ भिसा लगाउनुभएको थियो बाबुरामजी बताउनुस् त ?’
“ओलीले अगाडि भने, ‘तपाईका छोराछोरीले बेलायतको शिक्षा, जहाँ, कमसेकम २-४-५ लाख महिनाको खर्च हुन्छ, छोराछोरी कसरी पढाउनुभएको थियो भूमिगत हिँड्दा ? कहाँको आम्दानीले ?’
“पुलिस रेकर्ड खराब भएका कारण आफूलाई पासपोर्ट बनाउनसमेत गाह्रो भएको ओलीले सुनाए । तर प्रचण्ड बाबुराम युरोप घुमेको भन्दै उनले भने, ‘मैले पासपोर्ट लिएको बहुदलीय व्यवस्था आएर ०४८ मा सांसद भएपछि । (हाँस्दै) प्रचण्ड बाबुरामजीको पुलिस रेकर्ड खराब हुँदैनथ्यो ।’